तपाईंलाई कोरोना संक्रमण भएमा के गर्ने ? – नयाँ अभियान
उपचार र भ्याक्सिनमा के–के प्रगति भएका छन् ?
डा. रवीन्द्र पाण्डे ,
पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ आयो भने आत्तिनु पर्दैन । सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, हल्का व्यायाम, लक्षण अनुसारको उपचार तथा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भिटामिन सी, जिंक, भिटामिन डी, गुर्जो, अश्वगन्धा, तुलसी, दालचिनी, जेठिमधु, त्रिकटु आदिको चिकित्सकको परामर्श अनुरूप सेवन गर्नु स्वस्थकर हुन्छ । कहिल्यै पनि आफैँ वा युट्युब र सामाजिक सञ्जाल हेरेर तथा नन मेडिकल व्यक्तिले दिएको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्नु हुँदैन ।
हाम्रो शरीरको नर्मल तापक्रम ९८.४ डिग्री फरेनहाइट अर्थात् ३७ डिग्री सेल्सियस हो । ज्वरो आएजस्तो भएपनि तापक्रम ९८.४ डिग्री छ भने पारासिटामोल प्रयोग गर्नु पर्दैन । जब शरीरको तापक्रम १०० डिग्री हुन्छ अनि मात्र पारासिटामोल खानु राम्रो हुन्छ । टाउको दुखेमा, घाँटी दुखेमा वा शरीर दुखेमा पनि पारासिटामोल खानु उपयुक्त हुन्छ । रुघाका लागि प्रयोग हुने एन्टी कोल्ड ट्याब्लेटमा पनि पारासिटामोल ५०० मिग्रा मिसाएको हुन्छ । दुखाइ वा ज्वरोमा खाने फ्लेक्सनरब्रुसेट आदिमा पनि पारासिटामोल मिसाएको हुन्छ । तसर्थ यी २ वा ३ औषधिसँगै खानु हुँदैन । सँगै खाएमा शरीरको तापक्रम घटेर खतरनाक अवस्था आउन सक्छ ।
खोकीको लागि सामान्य कफ सप्रेसान्ट तथा एलर्जीमा प्रयोग हुने ( एन्टीहिस्टामिनिक ) औषधि स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा लिन सकिन्छ । खोकीको औषधि पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जस्तै सुख्खा खोकीको लागि, खकार आउने खोकीको लागि, सास फुल्ने खोकीको लागि । स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा आफ्नो अवस्था अनुसारको औषधि खानु उपयुक्त हुन्छ । खाना नरुचेमा विभिन्न प्रकारका खाना जस्तै फलफूल, सागसब्जी, दूध, अण्डा, ड्राइ नट्स, फ्रेस जुस, सुप आदि नियमित खाएर पोषण पु¥याउनु पर्दछ ।
खोकी लागिरहेमा, छाती दुखेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा ज्वरो आउने र जाने भएमा एकपटक कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिक वा फ्लु क्लिनिकमा गएर रगत, पिसाब तथा छातीको एक्स रे जाँच गर्नुपर्छ । यी लक्षण उपेक्षा गर्दा कहिलेकाँही छातीको संक्रमण र निमोनिया र फोक्सोमा पानी जम्मा हुने जस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्छन् ।
धेरै पखाला लागेर जलवियोजन भएमा
अक्सिजनको लेभल ९२ भन्दा तल भइरहेमा
निमोनियाको लक्षण देखिएमा
कुनै पनि लक्षणले गाह्रो भएमा
पीसीआर पोजिटिभ आउँदैमा कोभिड १९ लाग्दैन । तसर्थ डराउनु जरुरी छैन । संक्रमणलाई रोगमा जान नदिन उचित आहारविहार तथा व्यवहार गर्नुपर्दछ । एकजना चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनु राम्रो हुन्छ । भ्रम र हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन । नकारात्मक समाचार नहेर्ने र नपढ्ने, योग र ध्यान र संगीत र पठन र लेखन आदिमा व्यस्त रहेर मनलाई ननकोभिड बनाउनु पर्दछ । अनावश्यक सूचना तनावको स्रोत हो, तसर्थ दिनमा १(२ पटक मात्र समाचार हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । संक्रमित र मृतकको संख्या सुनेर डर मान्नुपर्दैन । हरेकको शरीर छुट्टै प्रकृति र इम्युनिटीको हुन्छ । आधिकारिक सूचना र सल्लाहमा विश्वास गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
हामीलाई कोरोना भाइरससँग डर लागेको हैन । हाम्रो डर मृत्यु हो, उपचारमा आउनसक्ने सास्ती हो । नेपालको सन्दर्भमा भने हो भने यसको मृत्युदर ०.६ ५ मात्र छ । जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घ औषधिसेवीहरूले पनि कोभिड १९ लाई सजिलै जित्नुभएको छ । हाम्रो पोषण, व्यायाम र तन्दुरुस्तीले रोगलाई परास्त गर्ने हो । तसर्थ सकारात्मक सोच, उच्च मनोबल र आशावादी प्रवृत्ति विकास गर्नु जरुरी छ ।
उहाँहरूलाई सम्पर्क भएको ५ दिनपछि पीसीआर टेस्टका लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ । होम आइसोलेसनमा बसेका बेला जम्मा भएको फोहोर दैनिक पोलिथिन ब्यागमा एयर टाइट हुने गरी राख्ने अनि त्यसको ७२ घण्टापछि मात्र फोहोर संकलन गर्ने ठाउँमा दिनुपर्दछ । निको भएपछि कोठाका हरेक सामान, कपडा, विस्तारा तथा कोठालाई संक्रमणरहित बनाएर छोड्नुपर्छ । आफू निको भएको २ हप्तापछि रक्तविज्ञसँग सम्पर्क गरेर प्लाज्मा दान ग¥यौं भने अन्य व्यक्तिको जीवन बच्छ । प्लाज्मा दान गर्दा स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर पर्दैन ।
थप एक हप्ता प्राणायाम, अनुलोमरविलोम लगायतका श्वासप्रश्वासका अभ्यास गर्ने, घाम ताप्ने, पोषिलो खाना खाने तथा तनावरहित समय बिताएर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आउँछ । यति गर्दा पनि पोजिटिभ देखियो तर आफूलाई लक्षण छैन भने फेरि परीक्षण गर्नु पर्दैन ।
पछिल्लो रिपोर्टअनुसार चीनका ३ वटा खोप ( सिनोभ्याकका २ सिनोफार्मको १ ) वटा, बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाको खोप, अमेरिकाको मोडेर्ना र बायोटेक र फोसुन र फाइजरको संयुक्त खोप गरेर यी ६ वटा खोप अन्तिम चरणको रिजल्टपछि स्वीकृतिको चरणमा पुग्नेछन् । खोपको मास प्रोडक्सन, प्याकिङ तथा वितरणका लागि ध्ज्इ, ग्ल्क्ष्ऋभ्ँ, न्ब्ख्क्ष्, ऋइख्ब्ह्, ऋभ्एक्ष् लगायतका संघ(संस्थाले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
चीनमा ३ वटा कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा खोप उत्पादन हुने, भारतमा विभिन्न देशको खोप प्लान्टमा काम भइरहेको, न्ब्ख्क्ष् नामक संस्थाले २० ५ खोप अल्पविकसित राष्ट्रका लागि सुरक्षित गरेको तथा चीन, भारत, रुस लगायतका देशले नेपालमा खोप उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको अवस्थामा खोप आएपछि नेपालले छिटो खोप पाउने अवस्था छ ।
चीन र भारतको भू(राजनीति तथा खोप कूटनीतिका कारण पनि नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ । सरकारले यी खोप कम्पनी, उत्पादक देश तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र संवादमा रहेर ३ करोड नेपालीका लागि आवश्यक डोज सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । जनस्वास्थ्य विज्ञ पाण्डे लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । लोकान्तरबाट साभार
“पाँचपोखरी कप २०७७’’ स्थगित गर्न खेलकुद विकास समितिको आग्रह